Waa maxay Tilmaamayaasha aan loo tixgelin karin inay yihiin Kaaliyeyaal Ganacsi? | vfxAlert official blog
Tilmaamee ayaa micno samaynayn?
Nidaamyada ganacsiga casriga ahi waxay kuu oggolaanayaan inaad falanqeyso oo aad saadaaliso dhaqdhaqaaqa lamaanaha lacagta adoo adeegsanaya tilmaamayaasha. MetaTrader si ballaadhan loo isticmaalo iyo shaxda TradingView ee barnaamijka vfxAlert waxaa ku jira ilaa 50 qalab oo noocaas ah. Tiradan waxaa lagu kordhin karaa fikrad aan dhammaad lahayn iyadoo ay ugu wacan tahay luuqadaha barnaamijka lagu dhisay. Tiro badan oo tilmaamayaasha shaxda ah ma xallinayaan dhibaatada sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah . Aynu aragno kuwa iyaga ka mid ah ee aan loo tixgelin si dhakhso leh kaaliyeyaasha ganacsiga.
Tilmaamayaasha "qoraaga" cusub ayaa sii wadaya buuxinta internetka. Baahida loo qabo adeegyada barnaamijyada, tirada weydiimaha raadinta ee la-taliyayaasha iyo qoraallada ma yaraanayaan sababo muuqda awgood:
Nidaamyada ganacsiga iyadoo la adeegsanayo tilmaamayaasha waa muddo gaaban. Suuqa wuxuu isbeddelayaa isbeddelka ama jihada isbeddelka, taas oo horseedaysa koror xoog leh oo ku yimaada calaamadaha beenta ah, oo horeyba loogu sixi karo iyadoo si fudud loo hagaajinayo xuduudaha. Waa inaan bedelnaa nidaamka ganacsiga.
Tirada ganacsatada algorithmic ayaa sii kordheysa. Horumarinta tiknoolajiyada waxay fududeyneysaa in aalado loo adeegsado ganacsiga, oo ay ku jiraan kuwa bilowga ah ee haysta dhalanteedka ah in ay suurtagal tahay in si buuxda loo otomateeyo macaash sameynta Forex ama ikhtiyaar ikhtiyaari ah.
Horumarinta tilmaamayaasha caadada ah, qoraallada iyo la-taliyayaashu waa warshad faa'iido gaar ah leh. Xaaladda dambe, xaalad inta badan soo ifbaxa in lagu iibiyo tilmaame gebi ahaanba aan shaqeynin. Aynu nidhaahno wuxuu ku helay lacag la'aan, laakiin adeegsadaha mustaqbalka wuxuu waqti ku qaadan doonaa rakibidda, tijaabinta iyo ka-khaldamida.
Waxaa jiri doona wadahadal dheer oo barnaamij-qaadaha ah, oo la isku dayayo in la ogaado waxa dhibaatadu tahay, taas oo u horseedi doonta xitaa waqti badan iyo dadaal badan, iyo xitaa lacag. Maqaalka wuxuu sharxayaa sida loo kaydiyo ilahaaga isla markaana si dhakhso leh loo aqoonsado faa'iido darrada tilmaanta la soo jeediyay.
1. Calaamado cad malaha
Markii ay soo if baxeen tilmaamayaasha, ganacsigu wuxuu noqday mid fudud xagga macnaha ah in isgoysyada khadadka iyo heerarka xad dhaafka / xad dhaafka ah, isbeddelada ku dhaca histogaraamku ay siinayaan calaamado iyo sharciyo cad oo lagu furayo boos. Tani waa faa iido weyn marka loo eego falanqaynta garaafka, oo u baahan taxaddar gaar ah marka la ogaanayo qaababka iyo dhisidda qaababka joomatari.
Haddii aysan jirin calaamado ganacsi oo la fahmi karo oo ku saabsan CALL / PUT, halkii, waxay si fudud u raaceysaa koorsada - wax macno ah ma samaynayso .
Sawirka wuxuu muujinayaa tilmaame adeegsanaya, sida ay sheegeen horumariyeyaasha, qaacido adag oo loogu talagalay xisaabinta entropy. Waxay awood u leedahay inay go'aamiso sida loo saadaalin karo dhaqdhaqaaqa shumaca hadda jira.
Natiijooyinka 0 ilaa 1 waxay soo jeedinayaan in qiime sare ay siineyso 100% saxnaanta saadaasha. Dhibaatada jirta ayaa ah in tilmaamuhu uusan si sax ah u tilmaamaynin sida 3-4 shumaca soo socda, saacad, maalin ay ku dhamaan karaan: hoos u dhac, kor u kac, ama dabaq.
Haddii ganacsaduhu uusan fahmin sida calaamadda loogu hirgaliyay shaxda, ma awoodi doono inuu si sax ah u tijaabiyo qalabka, iyo tilmaamayaasha aan tooska ahayn, sinnaba uma saameyn karaan macaashka, waxay noqon karaan kuwo xiiso leh oo keliya aragtida falanqaynta .
2. Xirfado badan oo faa'iido leh inta lagu jiro muddada imtixaanka
Qoraa kasta oo tilmaame wuxuu ku dadaalayaa inuu u xaqiijiyo iibsadaha ama macaamilka suurtagalka ah (haddii koodhka loo qaybiyo lacag la'aan) mustaqbalka faa'iidada leh ee qalabkooda.
Daqiiqadaha ugu horeeya ee daawashada ama aqrinta soo bandhigida, ganacsaduhu waa inuu u arkaa in isaga ka hor ugu badnaan-cusub "Graal", ugu yaraan - aalad waxtar leh oo xalinaysa dhibaatada fidsan, ka-hor-imaad ama isbeddel ganacsi. Waa inay jiraan macaamil badan oo wax ku ool ah, oo meel dhinac ah waa in lagu xuso gudbinta wixii ku saabsan khasaaraha suurtagalka ah.
U fiirso calaamadaha ganacsiga nool ee tilmaame kasta oo falaar ah. Meel kasta oo ka mid ah tirooyinka ayaa lagu muujiyay baahsanaanta ganacsiyada faa'iidada leh. Algorithm kasta wuxuu leeyahay dayacanka oo bixiya khasaaro isdaba joog ah, laakiin horumariyahee ayaa si daacad ah uga hadli doona iyaga?
3. HFT (Ganacsi Frequency Trading) tilmaamayaasha
Tilmaamayaasha soo noqnoqda ee sarreeya waxay la yimaadeen xeelado istiraatiijiyadeed oo u baahan ganacsatada inay yeeshaan xirfado gaar ah markay gacanta ku ganacsanayaan, laakiin had iyo jeer kuma habboona istiraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Dhawaaqa ganacsatada, xeeladdan waxaa loogu yeeraa "pipsing". Qaar ka mid ah dallaaliinta ayaa isla markiiba ka mamnuucaya heshiiska Macaamiilka.
Tijaabinta otomaatiga ah ee qalabka noocan oo kale ah kuma xisaabtami karto daahitaannada furitaanka / xiritaanka heshiisyada by dillaal, cillad farsamo ee internetka iyo isweydaarsiga ganacsiga binary, saxnaanta xigashooyinka iyo arrimaha kale ee aan suuqa ka jirin.
4. Muujiyeyaal aan lahayn dejin
Barnaamijku wuxuu bixiyaa tilmaame halka ganacsaduhu kaliya ku hagaajin karo midabada ku jirta xuduudaha soo galinta. Xaaladda ugu xun, tani waa API oo baahisa calaamadaha ka soo baxa bot ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ku yaal server-ka hoos yimaada maamulka iibiye ama dillaal.
Xaaladda kowaad, suurtagal la'aanta dejintu waxay u horseedi doontaa xaqiiqda inay jiri doonto xilli markii algorithm uu ku guuldareysto isbedelka soo socda ee jihada isbeddelka muddada-dheer ee lacagta ama suuqa cryptocurrency. Waxba kama hor istaagi karaan tilmaame inuu lumiyo deebaajiga ganacsadaha bilowgii ugu horreeyay ama bil ka dib hawlgalka. Tani waa mid aan la saadaalin karin - ka dib oo dhan, algorithm lama yaqaan sida ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah u shaqeynayo, taas oo macnaheedu yahay inaysan macquul ahayn in la saadaaliyo fashilka istiraatiijiyadda.
Kaliya robot-ka internetka ayaa ka sii xumaan kara xulashada kor ku xusan. Xaaladdan oo kale, ganacsaduhu xitaa ma haysto fursad uu ku hubiyo hawlgalka algorithm ee taariikhda. Gaar ahaan haddii ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah uusan xitaa macluumaad kooban ka bixin istiraatiijiyadda. Calaamadaha waxaa bixin kara Martingale, isgoys fudud oo ka kooban laba celcelis dhaqaaq, ama farsamooyin kale oo fudud oo laga heli karo dhammaan boosteejooyinka bilaashka ah.
Micnaha tilmaame kasta iyo calaamadaha binary auto waa fikrad ah in ganacsade waa inuu barto oo fahmo. Markuu fahmay sida calaamaddu u soo baxdo, isticmaaluhu wuxuu nidaamkan ugu beddelayaa asaga. Laga soo bilaabo xilligii sarrifka ugu horreeyay uu muuqday, waxaa caddaatay in aysan jirin laba ganacsade oo si siman u ganacsada. Markuu fahmay aragtida, ficil ahaan, si tartiib tartiib ah midkeen kasta wuxuu horumariyaa dejimaha tilmaam gaar ah iyo xeeladaha isticmaalkooda.
5. Tilmaamayaasha Heerka
Haddii tilmaamuhu uu kaliya dhiso heerarka taageerada / iska caabinta, markaa waxtar uma leh ganacsiga algorithmic, iyo waxtarka calaamadahaas lama baari karo tijaabiyaha. Qalab noocan oo kale ah ayaa sawiraya, sida caadiga ah, maahan mid, laakiin dhowr xariiq, oo tilmaamaya nidaam dhan oo xeerar ah oo fududeynaya helitaanka salka ama dusha sare ee suuqa.
Bilowgii maqaalka, waxaa la xusay in barta adeegsiga tilmaamayaasha ay tahay in la fahmo astaamahooda. Heerarka muujinta ayaa loola jeedaa falanqaynta garaafyada, halkaas oo, marka lagu daro iska caabbinta iyo taageerooyinka, qaabka shumaca, isku-dhafkooda, iyo joogitaanka qaababka farsamadu ay muhiim yihiin.
Haddii ganacsaduhu leeyahay xirfadaha falanqaynta shumaca, heerarka dhismaha ayaa noqon doona mid ka mid ah xirfadaha khasabka ah, uma baahnid inaad ku iibsato tilmaame tan. Waa ku filan oo keliya in la isticmaalo istiraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah, oo falanqeysa sida shumaca loo sameeyay, sida isbeddelka isbeddelay, iyo mugga xiisaha furan ee isweydaarsiga iyo tilmaamayaasha kale ee dijitaalka ah ee suuqa. Heerarka sawir-qaadistu maahan waxa ugu weyn, laakiin waxay si fiican ugu muuqataa jaantuska, gaar ahaan haddii si toos ah loo sawiro.
Let ee Soo koob
Raadinta tilmaamayaal cusub iyo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa cunsur muhiim u ah ganacsiga guuleysta. Si aan laguu qaldamin, dooro mawduucyo mawduuc leh sumcad wanaagsan, runti ha aaminin dib u eegista, si buuxda u tijaabi, oo markasta go'aannadaada samee.